‘ढुक्क भएर फोन चलाउनुहोस, गुगल र फेसबुक नचले पूरै पैसा फिर्ता’, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
‘ढुक्क भएर फोन चलाउनुहोस, गुगल र फेसबुक नचले पूरै पैसा फिर्ता’
काठमाडौं । नेपालका लागि हुवावे स्मार्टफोनको वितरक कल मोविलिटीले हुवावेका स्मार्टफोन र ट्याब्लेटहरूमा गुगल एपहरू तथा फेसबुक चल्ने प्रष्ट पारेकोछ। उसले ढुक्क भए फोन किन्न र चलाउन उपभोक्तालाई आग्रह गरेको छ।
यदि ती एप्सहरु नचलेमा फोन तथा ट्याबलेटको पूरै मूल्य फिर्ता गर्ने उसले प्रतिबद्धतता पनि व्यक्त गरेको छ। हुवावेका उत्पादनहरूमा एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टमको निर्माता गुगल हट्ने भन्ने चिन्ता व्यक्त भइरहँदा त्यस्तो नहुने भन्ने आफ्ना ग्राहकहरूलाई आश्वस्त पारेको छ।
अमेरिकाले हुवावेलाई प्रतिबन्ध लगाएपछि गुगलले हुवावेसँगको सहकार्य तोड्ने घोषणा गरेको थियो। त्यस्तै फेसबुक जस्ता एप्सहरु पनि फोनमा नहुने बताइएको छ। तर यी सब व्यवस्था यसपछि निर्माण हुने नयाँ मोडलका फोन तथा ट्याबलेटमा मात्र लागू हुने छन्।
अमेरिकी प्रतिबन्धका बाबजुद सन् २०१८ को विश्वव्यापी त्रैमासिक बजार अनुगमन प्रतिवेदनमा हुवावे विश्व स्मार्टफोन बजारमा दोस्रो स्थान हासिल गर्न सफल रहेको छ। आईडीसी, एसए, क्यानलिस र काउन्टरपोइन्टले जारी गरेको रिपोर्टअनुसार हुवावेका स्मार्टफोन सामसङपछि बढी बिक्री भएका छन्।